Konkolaataa biteefii ilmaan oromoo ajjeesisisuun gahee guddaa kan taphataa ture NAMA MAQAAN ISAA MAAMUSH jedhamuudha – Kichuu
HomePhoto GalleryKonkolaataa biteefii ilmaan oromoo ajjeesisisuun gahee guddaa kan taphataa ture NAMA MAQAAN ISAA MAAMUSH jedhamuudha
Konkolaataa biteefii ilmaan oromoo ajjeesisisuun gahee guddaa kan taphataa ture NAMA MAQAAN ISAA MAAMUSH jedhamuudha.
Innii yeroof miliqee jira garuu harkaa QEERROO AFRIKKAA KIBBAA jalaa bahuun waan hin yaaddamneedha.
Kuni konkolaata isaa kaleesa namoota of jalatti bitateef guyyaa kaleesaa bitee kenneefidha.
Dhiigni OBBOLEESA KEENNA DHIIGAAN BAHA.
ሳይውል ሳይድር በጀዋንስበርግ አሰሳው ቀጠለ
በደቡብ አፍሪካ ጀዋንስበርግ ትላንትና ማታ በ ወያኔ ቅጥረኛ የተገደለው መሐመድ ሰይድ
የነብሰ ገዳዩ የማሙሽ መኪና ላይ ውሎ ሳያድር ዛሬ አስቸኳይ እርምጃ ተወስዶበታል ቀጣይ እርሚጃ ወዴት እንደሚሄድ ቪዲዮ ላይ ተናግረዋል እየሞቱ ዝም ማለት አበቃለ
Maalummaa #Caalaa_Bultumee uummanni bal’aan ijaa fi gurraan hamma gochaa fi jechaan bareechee beekutti #Shirri_barbaadame#mandaratti_xaxamus_secondifillee_waltajjii_goototaa fi #Sabboontota_Oromoo ijaaran irraa isa buusuu hindanda’u!
#Caalarratti jallina soquu fi kiyyoo kaa’aniifi hanga inni itti galutti warri dhaabatee ilaalaa ture,warri jallinatti muuxannoo qabu hundi hojii manee godhattanii #Caalarratti duulaa akka turtan bareechinee uummanni bal’aan beekna…keessumaa ammoo erga #Caalan_OMNf sirbee asii onneen #gandummaa dhaloota qaaniwwan sanaa daraan akka dabale yeroodhaa yerootti #hadhaa_fb fi #miidiyaa_birootin_facaaftaniin hunduu beeka! Hojiiwwan sabboontota #ajjeesuu,#affanuu,#maqaa_balleessuu fi #seenaa_uummataa_dabsuu firfirsuun #garaagarummaa_uummata_Oromoogidduutti kan maaddii gombisee ba’e #Gareewwan_maqaa_dhaaba_siyaasa_Oromoo_kabajamaatin daldalattan hundi keessan eenyu akka taatan isin beekna #Caalarraa afaan keessan cuqqaalladhaa! #Buchulloota_Fbrratti gadlakkistan tanneenis hidhadhaa! Dhimmi kun dhimma sabaati lallaaqqii mandara keessatti ittiin guddattan uummata Oromoo gidduutti danqarsuun dhaloota walitti garagalchuun haaga’u! #Caalan sabboonaa Oromoo qofa miti #Gaggeessaa_Qeerroo fi #Labata_haaraati akkuma #Jawaar_Mrratti bukeessaa baatanii dadhabdan Kanas laaqtanii dadhabdan dhiistu…garuu dhaloota hubannoon itti hir’atu #tokko_tokko_gufachiisuu_keessantu #virusii_Oromootti ta’aa jira!
Waa’ee #gurbaa_ajjeefametti gaafan deebi’u dhugaan bakka jirtu jiraattus #Gurbaan_OPDO_akka_deeggaruu fi #Ittiin_dhaadachaa keessumaa #Erga_Abiyyiin_filatamee as #ololaa_akka_tire_Fbsaa_jalaa_hubadheera! Kunammoo kabaja mucichatti kan godhu #ilmi_Oromoo_Due waanjedhu otoo hintain #Maalirratti_due waanjedhutu ulfina isatti naanneessa malee waandu’eef qofa #hidhii_xuuxun ilaalcha gowwummaati! Ammas dubbiin kun ija siyaasatiin laalamnaan #Caalaa_isabeeknu_San guyyaa takkatti cilee dibuun ergama diinni diriirsedh
Via : Sulxaan Jaarraa Alawan
Duraan duursee obbaleeysa keenya Mohammed Seid Rabbiin jannataan nuuf haa qanansiisu, maatii fi Oromoota hundaaf Sabrii fi jajjabina jechaa gama yaada koo ijotti yoon ceehu…Ajjeechaan kuni akkaan ragaalee adda addaa irraa argadhetti namoota 4’n tahuutu himama
Namoota kanneen keessa tokko nama Oromoo biratti baay’e jaallatamuufi Wayyaanee biratti OMN fi Jaawaritti aanee namni wayyaneen akka malee jibbitu Artist Caalaa Bultumeeti.
Yeroo baay’ee Sirba Caalaa Bultumeeti dhageeffattan jedhanii QEERROO baay’es akka adamsaa turan namni feesbuukii qabuu fi namni biyya keessa jiru ragaadha.
Eegaa Artist Caalaa Bultumee wayyaane biratti Sagaleen isaa NIWKULERI caala jechuun ni dandayama kuni akkas taanaan shirri ajjeechaa kuniis wayii jara kanaan xaxamaa jedhanii yaaduunis Abshaalummaadha.
Ammallee akka hubannetti namni ajjeechaa kanaaf osoo hin ta’in kan nama biraatiif maallaqa guddaa dhangalaase Sabaan Oromoo akka hin ta’iniitu himama; ajjeechaaniis jalqaba obbaleessa keenya kana osoo hin ta’in nama biraatiif ture jechuutu himama inniis namuma keenya kan oromooti.
Ani akka nama tokkotti yoon ilaale wayyaneen Caalaa Bultumee kana Ajjeesuu yokaan mana Hidhaa galchuu barbaaddeti kan kana mara harka lafa jalaatiin goote.ammaas akka inni Ummata Oromoo birattiis jibbamee QBO keessaahis hojiin ala ta’uufi.
Ammumayyuu akka argaa jirrutti namoonni baay’een suuraa caalaas balleessa olola biraas itti dabalaa, kuni duriis Oromoo miti Afaan Oromooti bare warri jedhuus guuteera😂
Isa bira darbanii Shawaa(Tuulama) guutuu namni Arrabsaa ykn Qeeqaa jiruus baay’edha
kuni amaleffatameera jechuunis ni danda’ama
Oromummaan dhiiga malee maqaa fi hojii miti.
Yoo ilmi Oromoo dhalataan Wallaggaa tokko waa balleesse maquma Wallagga guututiin walitti qabanii arrabsuun ykn qeequun akeekaaf kayyoo diinaa galmaan gayuudha.
Yoo Ilmi Oromoo dhalootaan Arsii ykn Harargee waa balleesse Harargee yokiin Arsii guutuu walitti qabanii arrabsuun ykn Qeequun kunii shira diinaan xaxame kan diinaaf bu’aa guddaa buusee umrii Gabrummaa Habashaa nurra dheeressee nu ukkaamsu ta’uu isaa hubatanii Nagaya buusuun abshalummaadha.
Shira wayyaaneen nuuf xaxxu ifumaaf itti utaallee galmaan gayuu keenya kan mullisu kanuma.kan galmaan gayaa turees numa
Mee dhugaa dubbachuuf kan ajjeese nama 4 jettan; 4’n keessaa kan Arrabsamaa qeeqamaa, Abaaramaa jiru nama tokko kanuma hubannee shira wayyaanee tahuu beeynee shira kana fashaleessuu qabnan ja’a.
Heera Oromoo keessattiis nama nama ajjeese Gumaatu jira.
Dhiyeenyuma Afrika Kibbatti Qabsa’aan Saba Amaraa tokkos qaama hin beekkamnen du’eera
Wayyaaneen du’a nama kanaafis ni shakkamti
Yaa Oromoo mee waliif obsaa obbaleeyyan Gadaamessa tokko,Gudeeda tokko keessaa waliin bahees walitti bu’anii waluma ajjeesu.
Dogongora jiruuf dhiifama